15 Sababaha Ganacsi ee Isticmaalka Twitter | Martech Zone
15 Sababaha Ganacsi ee Isticmaalka Twitter
Sabti, Noofembar 28, 2009 Sabtida, Oktoobar 25, 2014 Douglas Karr
Ganacsiyadu waxay sii wadaan halganka sababaha loo adeegsado Twitter. Soo qaado nuqul ka mid ah Twitterville: Sida Ganacsiyadu Ugu Noolaan Karaan Xaafadaha Cusub ee Caalamka by Sheel Israa'iil. Waa buug cajiib ah oo dukumiinti ka dhigaya dhalashada iyo koritaanka Twitter-ka oo ah wadiiqo cusub oo la yaab leh oo ganacsiyada ay ku wada xiriiraan.
Markii aan akhrinayey buugga, Shel waxay xustay dhowr sababood oo shirkaddu u rabto inay adeegsato Twitter. Waxaan u maleynayaa in qaar badan oo iyaga ka mid ahi ay mudan yihiin in la qoro… oo ay weheliyaan xoogaa dood ah… iyo waliba qaar kale oo yar.
Qaybinta Kuuboonada iyo Bixinta - maaddaama Twitterku yahay aalad isgaarsiineed oo ku saleysan rukhsad, waa habka ugu fiican ee loo qaybiyo dalabyada. Saxiib wanaagsan Adam Yar ayaa tan ku arkay maqaayada iyo warshadaha guryaha - halkaas oo isku darka ogeysiisyada Mobilada, Twitter, Facebook, Blogging iyo syndication ay ka caawiyeen kobcinta dhamaan meheradaha macaamiishiisa… inta ay suuqa ku jiraan!
La Xiriirka Shaqaalaha - halkii laga xiri lahaa server-yada emaylka ama waqtiga dadka lagu lumin lahaa qolalka kulanka, Twitter waa aalad iskaashi weyn. Xaqiiqdii, taasi waa sababta ay ahayd markii ugu horreysay oo uu Odeo ku abuuray magaca Twttr (aniga iyo e ayaa loo tuuray qoraal yar oo SMS ah!)
Soo Dhawaynta Cabashooyinka Macaamiisha - shirkaduhu waxay si joogto ah ula dagaallamaan si ay uga fogaadaan in dharkooda wasakhda ah loogu soo bandhigo indhaha dadweynaha. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah macaamiisha ha aaminin adeegga 5-xiddig dambe. Dhiirrigalinta ugu caansan iyo dhaleeceynta shirkadaha ayaa caadi ahaan yimaada ka dib jawaabtooda… ama dhaqdhaqaaq la'aan. Markaad aqbasho cabashooyinka macaamiisha ee bannaan, macaamiisha kale way arki karaan nooca shirkad ee aad tahay run ahaantii waa.
Helitaanka ama Dirashada Shaqo Qorayaasha iyo dadka shaqo doonka ah waxay adeegsanayaan Twitter-ka si ay ugu diraan shaqooyinka la doonayo ama shaqooyinka la furayo. Raadinta juqraafiyeed, waxaad xitaa heli kartaa sida ugu dhow ee aad raadineyso inaad shaqo hesho oo waxaad isku dari kartaa ereyo kale oo ku saabsan raadintaada.
Raadinta Macluumaadka iyo Wadaagista - Markii aan ku soo booqday kun ka yar, Twitter wuxuu noqday a beddel weyn u ah matoorada raadinta. Google ayaa sidoo kale ogaatay tan, ku dhexgalka bulshadaada internetka natiijooyinka raadinta. Caadi ahaan, jawaabaha aan helo waa kuwo aad u khuseeya maxaa yeelay kuwa i soo raaca waxay ka shaqeynayaan isla warshadda aniga oo kale.
Istaraatiijiyada Suuq-geynta Soo-galista - intii aan ka shaqeyneynay Compendium, waxaan bilownay inaan ogaanno tirada iyo tayada hoggaamiyeyaasha soo galaya ee ka yimid boggeena Twitter waxay aad ugu dhowdahay inay beddelaan marka loo eego raadinta. In kasta oo mashiinnada raadintu na siiyeen tiro aad u tiro badan oo booqdayaal ah, haddana waxaan gebi ahaanba bilownay inaan kula talino macmiisha inay raacaan barta Twitter-ka oo ay ku qalabayn karaan quudintooda iyagoo adeegsanaya qalabka sida Hootsuite or Twitterfeed.
Ganacsi Dadnimo - ganacsiyada aan wax yar ama aan xiriir la lahayn dadweynaha waxay ogaanayaan in bixinta taabashada bini aadamka ay u fiican tahay ganacsiga loona baahan yahay sii haysashada macaamiisha. Haddii ganacsigaagu uu ku dhibtoodo bixinta is-dhexgalka aadanaha oo ay kheyraad ku gaajaysan yihiin, Twitter waa dhexdhexaad weyn. Uma baahnid in lala socdo maalinta oo dhan (in kastoo aan kula talin lahaa… jawaabo deg deg ah ooh oo aahs hel), laakiin jawaabta ay shirkad aan wajiga laheyn ay ka helaan qof dhab ah oo wata avatar marwalba waa qabow.
Calaamadeynta Shaqsiyeed - barbar socoshada ganacsiga waa awooda shaqaalaha ama milkiileyaasha ganacsiyada inay sidoo kale dhisaan sumad shaqsiyeed. Dhisida astaan ​​shaqsiyeed khadka tooska ah waxay u horseedi kartaa waxyaabo badan… laga yaabee xitaa bilaabaya hay'ad adiga kuu gaar ah! Noqo mid iskaa wax u qabso ku shaqeeya. Dad aad u tiro badan oo ka walwalsanaa waxa ay u maleyn karto shirkadooda haddii ay indhaha ka saaraan indhaha dadweynaha ayaa hadda raadinaya shaqooyin maxaa yeelay isla shirkaddaas ayaa shaqada ka joojisay.
Isku-hagaajinta Raadinta Twitter-ka ee Hashtags - raadinta barta Twitter-ka ayaa sii kordheysa. Ku hel adigoo adeegsanaya hashtags si wax ku ool ah Tweets-gaaga ama farsamooyinkaaga autopost.
Isku xirka wax ku oolka ah - isku xirka khadka tooska ah ayaa horudhac weyn u ah isku xirka khadka tooska ah. Kuuma sheegi karo inta rajo ee aan ku soo maray Twitter-ka. Qaarkeen baa is yaqaanay muddo bilo ah kahor intaan dhab ahaan isku xirin khadka tooska ah, laakiin waxay u horseedday xiriirro ganacsi oo waaweyn.
Suuq geynta - Twitter waa midka ugu dambeeya ee suuq geynta fayraska. Retweet-ka (RT) waa aalad si aad ah u xoog badan… riixaya fariintaada shabakad ilaa shabakad daqiiqado gudahood. Ma hubo in ay jiraan teknolojiyad fayras oo dhakhso badan oo suuqa taal hadda.
Dhaqaale ururin - Shel wuxuu qorayaa tusaalayaal waawayn oo ah sida shirkaduhu ay si wax ku ool ah ugu adeegsadeen Twitter dadaallada samafalka. Faa'iidada waxay u leedahay ganacsiga iyo samafalka - maadaama ku lug lahaanshaha ganacsiyada si fiican looga buunbuuninayo barta Twitter-ka halkii ay ka sheegi lahaayeen barta internetka meel uun.
Dalbashada khadka tooska ah - Ka sokow rasiidhada iyo dalabyada, dadka waaweyni xitaa waxay qaadanayaan amarrada macaamiisha khadka tooska ah. Shel wuxuu wax ka qoraa dukaan kafee ah oo aad ku dhajin kartid amarkaaga oo aad ka soo qaadan karto. Aad u qabow!
Xiriirka Dadweynaha - Maaddaama ay Twitter ku shaqeyso xawaaraha teeb garaynta 140 xaraf, shirkaddaadu way ka hor mari kartaa qof walba competition tartanka, warbaahinta, xatooyada… adoo yeelanaya istiraatiijiyad dagaal oo PR ah oo lagu daro Twitter. Marka ugu horreysa ee aad ku dhawaaqdo, dadku way kuu imaanayaan. Ha u dhaafin warbaahinta dhaqameed ama baloog si aad wax u saxdo… isticmaal Twitter si aad u amarto una toosiso isgaarsiinta.
La socodsiinta Digniinta - dhibaato kaa haysataa shirkaddaada oo aad u baahan tahay inaad la xiriirto macaamiishaada ama rajooyinkaaga? Twitter wuxuu noqon karaa hab fiican oo tan lagu sameeyo. Pingdom xitaa wuxuu ku daray Twitter Alerts adeegyadeeda… maxay fikrad fiican tahay! Marka laga reebo… markay Twitter hoos u dhacdo ma isticmaali karaan adeegga alert Digniinta waxay noqon kartaa wax weyn sidoo sidoo kale… laga yaabee inaad ogeysiiso macaamiishaada in badeecadu dib ugu soo laabatay.
Shel wuxuu xusayaa in kiisaska qaarkood ee ganacsiga loo adeegsado buugaagtiisa aan toos loogu sifeyn karin dakhliga. In kasta oo tani run tahay, haddana aakhirka waa la cabbiri karaa oo dib loo soo celin karaa maalgashiga. Waxaan ku kalsoonahay in waaxda adeegga macaamiisha ee dabagal ku haysa mugga wicitaanka iyo Tweets ay sameyn karaan nooc cabbir ah si loo arko haddii Twitter-ka uu yareynayo celceliska wicitaanka madaama jawaabaha la baahiyay. Sida # 15… haddii boggeygu hoos udhaco oo la Tweeted… markaa dadkaasi waxay noqon doonaan kuwa aan sifiican u soo wicin si ay ii soo ogeysiiyaan maadaama ay arkeen inaan horeyba u xaqiijiyay arinta.
Maxaa iga maqnaa
Tags: rasiidhcabashada macaamiishadhimisxiriirka shaqaalahashaqo raadsomarketing inboundxog raadintadalabyola wadaagoSheel Israa'iilTwittertwitterville
Nov 29, 2009 at 12: 36 AM
Wow, kani waa liistada weyn Douglass. "Maxaan u maqanahay?" waxay umuuqataa sida saxda ah ee loodhameeyo qoraalkan maadaama waxkasta oo aan ka fikiri karo ay xoogaa horeyba meesha ugu jiraan. Waxaan kuu sheegi doonaa waxa iga maqan >> buuggan ku yaal keydkayga. Qoraalkii saddexaad ee maanta waa la soo sheegay sidaa darteed waxaan hubaa inaan iibsanayo toddobaadkan. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. –Paul
Nov 30, 2009 saacadu markay tahay 12:53 PM
Waxaad sharad, Paul! Waa buug aad u wanaagsan - waan ku faraxsanahay inaad liiska ku qortay.
Nov 29, 2009 saacadu markay tahay 1:49 PM
Muxuu yahay boosteejo cabsi badan Douglas! Waad ku mahadsantahay inaad naga siisay rasaas badan suuqgeynta Twitter iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada macaamiisheenna.
Mahadsanid Oscar! Xiiso leh inaan wali ubaahanahay rasaasta, miyaanay ahayn?
Ka socota Xiriirka Ganacsiga e-mailka. FYI.
Nov 17, 2011 saacadu markay tahay 7:51 PM
Kuwani waa qodobbo aad u wanaagsan, waxayna xaqiiqdii ku caddeeyeen run warshadeenna. Sababtoo ah waxaan nahay shirkad sahaminta khadka tooska ah ka sameysa, dadku waxay iigu yimaadaan Twitter iyo Facebook iyagoo la socda arrimahooda sida ay had iyo jeer ugu yeeraan taageerada macaamiisha. Waadna ogtahay waxaas, maxaa yeelay waxaan dareemayaa inay iyaga ku xiran yihiin shabakadda bulshada, waxaan hubinayaa inaan cabashadooda la daryeelo. Waxaan ka helnay tan jawaab celin wanaagsan tan, iyo khibradeyda, waxay abuureysaa dareen dhab ah oo bulshada ah. Ganacsi kasta oo aan ku jirin Twitter maalmahan si weyn ayaa loo waayey!